निर्यात अनुदान अवधि एक महिना थपियो : RajdhaniDaily.com -
Home अर्थ निर्यात अनुदान अवधि एक महिना थपियो
निर्यात अनुदान अवधि एक महिना थपियो
अब व्यवसायीले २४ असोजसम्म निवेदन दिन पाउने
काठमाडौं । विश्व महामारी कोरोना प्रभाव मध्येनजर गर्दै सरकारले निर्यातमा अनुदान समय एक महिना थपेको छ ।
चुलिँदो व्यापार घाटा न्यूनीकरण र स्वदेशी उत्पादन वृद्धि लक्ष्य लिएको सरकारले निषेधाज्ञा खुलेको पहिलो दिन बिहीबारबाट एक महिनासम्म अनुदानका लागि निवेदन दिने समय थप गरेको हो ।
यो सुविधा लिन अब व्यवसायीले आगामी २४ असोजसम्म उद्योग विभागमा निवेदन दिन सक्ने छन् । एक महिनामा बाटो म्याद समावेश गरिएको छैन । यसअघि, विभागले लकडाउनपछि एक महिनासम्म निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकारले लकडाउन खुला गरेको एक महिना नबित्दै स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि समय अपुग भएको भन्दै सरकारले पुनः समय थप गरिदिएको हो ।
यसमा सहभागी हुनेले ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’को दफा ४ बमोजिमको मालवस्तु निर्यात गरी अनुदानका लागि मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । २०७६ चैतअघि नै म्याद गुज्रिसकेको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
विभागका निर्देशक विनोदबहादुर खड्काले निषेधाज्ञाका कारण घरबाट निस्कन नपाएका व्यवसायीका लागि सरकारले केही राहत दिन अवसर प्रदान गरेको बताए ।
सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यविधि बनाई व्यवसायीलाई अनुदान अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अनुदान प्राप्त गर्न वस्तु निर्यात गरेबापत विदेशबाट पैसा प्राप्त भएपछि आफूले कारोबार गरेको बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।
प्रक्रिया पूरा भएका सबैले सोही बैंकमार्फत अनुदान रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’ ले गरिदिएको छ । स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गरी निर्यातमा नगद अनुदान बढाउने सम्बन्धमा सरकारले दुई वर्षअघि कार्यविधि पारित गरेको थियो ।
त्यसको केही महिनापछि कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले कार्यविधि जारी गरेको थियो  । यसका लागि सरकारले एक महिनाअघि निर्यातमा दिंदै आएको नगद अनुदान सीमा बढाएर पाँच प्रतिशतसम्म पु-याएको थियो ।
पछिल्लोपटक उच्च र न्यून निर्यातका कारण व्यापारघाटा चुलि“दै गएको भन्दै सरकारले निर्यातबापत नगद अनुदान सीमा बढाएको हो । कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएर स्थानीय घरेलु उत्पादन बढाएर निर्यात प्रोत्साहन उद्देश्यले सरकारले अनुदान सीमा बढाएको छ । यसअघि, एकदेखि दुई प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाउने व्यवस्था थियो ।
सोही व्यवस्थाअनुसार निर्यातकर्ताले तोकिएका विभिन्न २६ प्रकारका वस्तु निर्यातमा तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाउँदै आएका छन्  । यस्ता वस्तु औद्योगिक र अन्य उत्पादन गरी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
औद्योगिक उत्पादन सूचीमा परेका १५ प्रकारका वस्तु निर्यातमा सरकारले ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिँदै आएको छ ।
यसैगरी, अन्य उत्पादन सूचीमा रहेका ११ प्रकारका वस्तु निर्यातमा तीन प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिँदै आएको छ । जसका कारण घरेलु उत्पादन बढ्ने र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
सरकारले १४ माघ २०७५ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरी जारी गरेको निर्यातमा अनुदान प्रदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनः ३ साउन २०७६ मा संशोधन गरेको थियो । संशोधित कार्यविधिअनुसार अहिले निर्यातकर्ताले यस्तो अवसर पाएका हुन् ।
कौशिला कुँवर - April 22, 2021 0
कर्णाली । पछिल्लो समयमा रुघाखोकी र ज्वरोले विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिका प्रभावित हुन थालेका छन् । रुघाखोकी, ज्वरो आएर बान्ता गर्ने, ढल्ने अवस्था भएपछि ग्रामीण...
बच्चाको झै झगडालाई लिएर कुटाकुट, एक महिलाको मृत्यु
सर्लाही । बच्चाको झै–झगडालाई लिएर कुटाकुटा हुँदा सर्लाहीमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । सर्लाहीको हरिपुर्वा–८ वसन्तपुरमा कुटाकुटा हुँदा ३५ वर्षीया सैदुन खातुनको मृत्यु...
एजेन्सी । ब्राजिलमा कोभिड १९ को संक्रमणबाट एकै दिनमा एक हजार २९० जनाको ज्यान गएको बताइएको छ । आइतबार यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले दिएको समाचारअनुसार...
भिडियोमा भूपेन्द्रको नयाँ गजल
कला Kumar Raut - April 17, 2020 0
काठमाडौं । यसअघि २०५९ सालमा एकल गजल एल्बम बुलबुल श्रोतामाझ ल्याएका गजलकार तथा गीतकार भूपेन्द्र खड्काले यतिबेला अर्को गजल श्रोता र दर्शकमाझ ल्याएका छन्...
क्वारेन्टाइनबाट भागेका युवक मोटरसाइकल दुर्घटनामा घाइते
प्रदेश ५ Sushila Bishwokarma - July 10, 2020 0
तुलसीपुर । मावि सेन्टर स्कुल तुलसीपुरको क्वारेन्टाइनमा बसेका भनिएका युवक डोक्रेनामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी घाइते भएका छन् । मावि सेन्टर स्कुलको क्वारेन्टाइनबाट हिजो साँझ भागेका...
एस बैंकका ग्राहकमा अन्योल, पैसा झिक्न बैंकमा भीड
विदेश Prem Shyangtan - March 6, 2020 0
मुम्बई। भारतको केन्द्रीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले मुम्बई क्षेत्रमा निकै लोकप्रिय ‘यस बैंक’बाट एक महिनासम्म सीमित रकम मात्र झिक्न पाउने आकस्मिक निर्णय गरेपछि निराश बैंकका...
स्टेगेन बार्सिलोनामै रहने
Not-to-be-missed Kumar Raut - May 23, 2020 0
मड्रिड । क्याटलान क्लब बार्सिलोनाका पहिलो रोजाइका जर्मन गोलरक्षक मार्क आन्द्रे टेर स्टेगेनले क्लबसँगको सम्झौता नवीकरण गर्न सहमत भएका छन् । स्टेगनले कम्तीमा पनि...
पिसिआर परिक्षण दायरा नबढाउँदा जोखिम बढ्ने खतरा
प्रदेश Dhruba Lamsal - May 30, 2020 0
बर्दिया । केहिदिन यता भारतबाट घर फर्कनेहरुको लर्को छ । भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका विभिन्न नाका तथा नेपालगंज जमुनाहा नाकाबाट दिनहँ सयौँ मानिसहरु जिल्ला...
बेसहाराको सहारा बन्दै ‘भोर जनकपुर’
प्रदेश Dhruba Lamsal - April 25, 2020 0
सर्लाही । सर्लाहीमा रहेको एक गैर सरकारी संस्था बेसाहारा परिवारको सहारा बन्दै गएको छ । ‘भोर जनकपुर’ नामक संस्थाले १ सय ५०...
अब पिसीआर परीक्षणको शुल्क दुई हजार मात्र
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पिसीआर परीक्षण शुल्क रु दुई हजार तोेकेको छ । मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा...
प्रदेश ६ Sushila Bishwokarma - November 10, 2020 0
‘लुम्बिनी आउन धेरै चिनियाँ आतुर छन्, तर पूर्वाधार भएन’
Editor-Picks Dhruba Lamsal - August 16, 2020 0
काठमाडौँ । “लुम्बिनी एक दुई दिन या एक हप्तामात्र घुम्ने ठाउँ होइन । लुम्बिनी आउने कुनै पनि देशका पर्यटकले दुई चार दिनमात्र घुमेको सुनाउँछन्,...
स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू, तपाईं चुकेकै हो ?
भर्खरै Kumar Raut - March 30, 2020 0
स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू नमस्कार नमस्कार ! यो महामारीको समय छ, केही बोलिदिनुस् न ? मन्त्रीः अहिले छोडिदिनुस, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्यूसँग...
शैलुङ चिनाउन म्युजिक भिडियो
राजधानी संवाददाता - April 19, 2021
आठ लाख भूमिहीन
आजबाट आयल निगम ईआरपी प्रणालीमा
कौशिला कुँवर - April 16, 2021
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – ५ बैशाख
Rajdhani Daily - April 18, 2021